OoVimba beCAD-Funda ukuRhweba
Ixabiso lamandla e-CAD aMandla aQinisekayo okuBuyisa uQoqosho
I-CAD yayingoyena mdlali ubalaseleyo phakathi kwejors, wehla waya kwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ngo-Agasti (i-CAD eyona yenze kakuhle ngokuchasene ne-USD). Iindleko zamandla kunye nedatha eyomeleleyo yomsebenzi zenze ukuba uLoonie abuyele kwakhona. Uxinzelelo lwexabiso lokunyuka kwamaxabiso luye lwanyusa ulindelo malunga nokunyuka kwezinga yiBhanki yaseCanada.
Ixabiso lamandla yayingumqhubi ophambili wamandla o-loonie. Njengokuba ingxaki yamandla eTshayina, eYurophu naseUnited Kingdom yayisiya isanda, amaxabiso eoyile ekrwada anyuka. Kwiveki ephelileyo, i-WTI kunye ne-Brent yexesha elizayo yeoyile ekrwada inyuke nge-5% kunye neepesenti ezingama-4.95 ngokwahlukeneyo. Kwiveki ephelileyo, ikhontrakthi yexesha elizayo ye-WCS, elibonisa uphawu lweoyile ekrwada yaseCanada, inyuke ngeepesenti ezi -3.3. I-CAD inyuke njengoko imfuno yokuthumela ngaphandle ioyile yaseCanada inyuke.
Ngo-Septemba, inani labantu abaqeshwe eCanada lenyuke nge-157.1 lamawaka, ngaphezulu kokulindelweyo ngama-61.2 amawaka kunye no-Agasti wama-90.2 amawaka. Nge-Agasti, iqondo lokungabikho kwemisebenzi lehle ngeepesenti ze-0.2 ukuya kwi-6.9%, njengoko bekulindelwe, kwaye laqhubeka ukuphucula ukuya kwiipesenti ze-7.1. Oku bekungafani kwaphela neenkcukacha-manani ezirhoxisayo zemivuzo yase-US. Ngo-Septemba, i-US yongeze kuphela + i-194K imisebenzi engeyiyo eyemveliso, incinci kakhulu kunesivumelwano se-500K. Inani lika-Agasti lahlaziywa laya kunyuka ngo-366K. Izinga lentswela ngakwelinye icala, lehle kakhulu ukusuka kwi-5.2 yeepesenti ngo-Agasti ukuya kwi-4.8 yeepesenti ngoku. Intengiso yayilindele ukwehla kancinci ukuya kwiipesenti ezi-5.1.
Ukunyuka kwamaxabiso kweli lizwe kuhlala kuphezulu. Ngo-Agasti, isihloko se-CPI sonyuke saya kwi -4.1 yeepesenti y / y, ukusuka kwi -3.7 yeepesenti kwinyanga ephelileyo. Ukunyuka kwamaxabiso epetroli, ebephezulu ngama-32.5 epesenti kunelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo, kube negalelo phantse kwipesenti kumanqaku asentloko.
I-CPI engundoqo inyuke ngepesenti ye-3.5 ngonyaka, inyuke ukusuka kwi -3.3 yeepesenti ngoJulayi. Ngapha koko, umndilili wamanyathelo amathathu ebhanki ephambili anyuke nge-2.6 yepesenti ngonyaka, elona nqanaba liphezulu ukusukela ngoMatshi 2009, ebonisa uphawu olusekwe kububanzi bexabiso elonyukayo. Ukunyuka kwamaxabiso okwangoku kubonakala ngathi kuhlala ixesha elide kunokuba bekulindelwe. Ngelixa iingxaki zonikezelo zingenakulindeleka kwixesha elizayo elibonakalayo, ingxaki yamandla kulindeleke ukuba iqinise.
Ukuqeshwa okuqinileyo kunye nokunyuka kwamaxabiso kuye kwalawula intetho yokunyuka kwezinga ngeBhanki yaseCanada. Izivuno zebond eCanada zikhuphukile kulo lonke igophe, kunye nemveliso yeminyaka eli-10 efikelela kwelona nqanaba liphezulu ukusukela ngoMatshi. Kwintlanganiso ye-BOC ka-Okthobha, siqikelela ukuba i-BOC iyakusika ukuthenga kwayo kwe-QE ukuya kwi-CAD 1 yezigidigidi ngeveki, ngenqanaba lokuqala lokunyuka liza ngasekupheleni kuka-2022.
Njenge-Aussie kunye ne-CAD Falls Mfutshane, i-NZD iphakama ngasemva kwe-CPI eyomeleleyo
Ukuhlaziywa: 16 Julayi 2021
Ukubuyela umva kwi-Aussie kunye ne-CAD ikakhulu kuzolile ngenxa yoku. I-Yen, kwelinye icala, ibonakala ngathi iyancipha kancinci njengoko unyuka luphela. Idola yaseNew Zealand inyuke kakhulu kwakhona namhlanje, njengeyona iphezulu Ingxelo yeCPI kwiminyaka elishumi ivelise intelekelelo engakumbi malunga nokunyuka kwereyithi ye-RBNZ Idola, i-euro, kunye neponti ezibalaseleyo zonke zikwimeko yokuhamba. Ngokwezi veki, iKiwi ngoyena mdlali ugqwesileyo, kodwa i-CAD kunye neAussie zezona zibalulekileyo ukuza kuthi ga ngoku.
INew Zealand CPI inyuke nge-1.3% QoQ kwikota yesibini, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-0.7% QoQ. Kwiinyanga ezili-12 Isalathiso sexabiso sabathengi sikhawuleze saya kwi-3.3% y / y ukusuka kwi-1.5% y / y, ngaphezulu kokulindelekileyo kwe-2.8% y / y. Ireyithi yonyaka iphezulu phantse kwiminyaka elishumi. Ukongeza, la manani ayengaphezulu kwengqikelelo ye-RBNZ ye-0.6% QoQ yokunyuka kwamaxabiso kwe-2.6% YoY.
Amarhe okunyuka kwangoko kwinqanaba le-RBNZ ayaqina emva kokukhutshwa. I-Westpac ngoku ilindele ukonyuka nge-0.25% kwi-OCR ngo-Agasti, kunye neenzuzo ezintsha ngo-Okthobha no-Novemba. Iziganeko zanamhlanje zityhale i-AUD / NZD ukuya kwinkxaso ye-1.0597 yokuqhubeka nokwehla kwexesha elifutshane ukusuka kwi-1.0944. Ukwehla okunzulu kunokubonwa kumgangatho ophakathi wexesha eliphakathi kwi-1.0415.
I-Aussie kunye ne-CAD ayinakho ukukholelwa kuBullish
Uphuhliso kwimakethi yezabasebenzi yase-Australia, ngakumbi idatha yemivuzo, iya kubaluleka ekuphembeleleni ulindelo malunga nomgaqo-nkqubo weRBA kunyaka olandelayo okanye emibini.
Iziphumo zalo naluphi na uhlengahlengiso kwi-AUD / USD ziya kugqitywa kwindlela yomgaqo-nkqubo eqikelelweyo ye-Federal Reserve. Kuyinyani ukulindela i-AUD / i-USD ukuba ihambe ezantsi ukuba i-RBA ijongwa njengomgaqo-nkqubo ododobalisayo. Ngenxa yoko, uqikelelo lwethu lwe-AUD / USD luhlaziyiwe lwaphantsi. Ekupheleni konyaka, sinokubona isibini semali sijikeleza kufutshane ne-0.72.
Imali yaseCanada, kwelinye icala, ixhamle ekunyukeni kwamaxabiso eoyile ekrwada. Nangona kunjalo, ukwanda kokuqhambuka kwe-COVID-19 okubandakanya uxinzelelo lwe-Delta kwezinye izizwe, kunye neenkxalabo malunga necebo le-OPEC + lokuphucula ukubonelelwa, yaphosa ipall malunga nethemba legolide elimnyama. Ngenxa yoko, umendo wokunganyangeki kangako kwi-loonie uhlala ungalunganga, okuthetha ukuba isibini se-USD / CAD sinokulindela ezinye iinzuzo.
Isibini se-USD / CAD sityibilikise ezantsi ngomhla wokugqibela weveki, sonakalisa ezinye zeenzuzo zosuku lwangaphambili ukuya kufikelela kwiinyanga ezintathu eziphakamileyo, emva kokuzabalaza ukufumana ukwamkelwa ngaphezulu kweempawu ze-1.2600.
tags Aussie, Cad
USD / CAD Range Breakout!
I-USD / i-CAD yandisa uluhlu lwayo lokuhamba phambi kwedatha yokunyuka kwamaxabiso e-US. Ngokumangalisayo okanye hayi, esi sibini siye sahlangana emva kwe-BOC kwaye ngoku sele sisondela kumanqanaba okumelana nokuchasana.
Okokuqala, i-ECB inokuzisa isenzo kwi-USD kungekudala. Umgaqo-lawulo wemali ungashiywa ungatshintshanga kwintlanganiso yanamhlanje. I-USD / i-CAD inokurejista intshukumo ebukhali emva kokupapashwa kwe-CPI yase-US kunye neCore CPI.
Ndiyakholelwa ukuba ngokuhambelana nedatha yokulindelweyo okanye okungcono kunokunceda i-USD ukuba ilawule ngokupheleleyo. Amabango e-US yokungabikho kwemisebenzi anokuhla ngaphezulu ukusuka kwi-385K ukuya kwi-370K eya kulunga kwi-greenback.
I-USD / CAD H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-USD / i-CAD ithengisa ngokubomvu kwinqanaba le-1.2106 kwaye kubonakala ngathi ayithathi sigqibo. Ibanjwe ngaphakathi kuluhlu nangaphakathi konxantathu omncinci. Ukuqhekeka okuvela kwezi patheni kunye nokuphakama okuphezulu kunokubonisa intshukumo ephezulu.
Kananjalo, ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-23.6% kunokubonisa ukubuyela umva okunokubakho kwixesha elifutshane.
I-USD / i-CAD ibonakalisile ukuba icala elisezantsi linomda kwaye linokujika liye phezulu. Okwangoku, ixabiso lifuna i-bullish ekhulayo evela kuqoqosho lwase-US ukuze ikwazi ukutsiba phezulu.
tags Cad, ECB, Ukunyuka kwamaxabiso e-US, iUSD, USDCAD
I-USD / CAD yokuGuqulwa kweBull?
I-USD / i-CAD ihamba ecaleni kwexesha elifutshane ilinde i-spark ekhulayo ukuze ikwazi ukuphucula umlenze omtsha. Ngokobuchwephesha, esi sibini sibonisile imiqondiso engaphezulu, kodwa kuselithuba ukuba uhambe ixesha elide ukusuka apha.
I-US ifuna inkxaso eyomeleleyo evela kuqoqosho lwase-US ukuqala ukwanda xa kuthelekiswa neentshaba zayo. Iinkonzo ze-ISM zase-US ze-PMI, amabango okungaqeshwa, kunye ne-ADP engeyiyo yeFama yeNgqesho yoTshintsho zingashukumisa iimarike namhlanje. Kwakhona, ungalibali ukuba i-US iza kukhupha i-NFP, iNqanaba lokungaSebenzi, kunye neAvenue Hourly Earnings ngomso.
Ingcono kunedatha ekulindelweyo inokuyinyusa i-DXY kwaye inokuphakamisa ukubuyela umva kwexesha elifutshane.
I-USD / CAD H4 Uhlalutyo lobuGcisa
I-USD / CAD ibanjiwe phakathi kwenqaku le-pivot yeveki (1.2079) kunye nenqanaba le-S1 (1.2017). Ukwaphuka kwayo ngokuhlukana okukhulu ngezantsi kwe-S1 kubonakalise ukukhula okunokubakho.
Okwangoku, kufuneka silinde ukuphuma okusebenzayo ngaphezulu kwenqaku le-pivot yeveki (1.2079) kunye nexabiso lokwenza indawo ephezulu ephezulu ngaphambi kokuthatha inyathelo. Intshukumo yamaxabiso iphuhlise iipatheni zemigca eqhekezayo apha kwixesha elifutshane, ibonisa ukubuyela umva okunokubakho.
I-USD / i-CAD ibonakalise iimpawu ezigqithileyo emva kokubhalisa ukwehla okubukhali. I-USD ingakhokela ukuba idatha yase-US ingene ngcono kunokuba bekulindelwe.
Joyina iQela lethu le-VIP le-TP2 APHA
tags Cad, ICAD yaseCanada, Loonie, Umbono woRhwebo, ukuseta urhwebo, iUSD, USDCAD
I-NZD / i-USD ephantsi kabini!
I-NZD / i-CAD ijikeleze ngaphezulu namhlanje kwaye kubonakala ngathi izimisele ukuphinda iqhubeke kwakhona. Ngokobuchwephesha, isibini siphuhlise iphethini ye-Double Bottom, ke inokutsiba phezulu kwixesha elifutshane.
Idola yaseNew Zealand inyanzeliswa ngamandla kwaye inokuxabisa xa kuthelekiswa nazo zonke izimbangi hayi kuphela xa kuthelekiswa neCAD. Okwangoku, sifuna ukuqinisekiswa ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide kwesi sibini. Ixabiso libekwe ngezantsi kwenqanaba lokuchasana.
Uhlalutyo lobuchwephesha beTshathi ye-NZD / CAD H1!
I-NZD / i-CAD itsibe ngaphezulu komgca we-downtrend obonisa ukuguqulwa okuphezulu. Isilele ukuphinda uzame ukuxhathisa okwaphukileyo. Ngoku ihamba ecaleni phakathi kwenqanaba le-0.8800 kunye ne-0.8886.
Ukuqhekeka okuphezulu kolu luhlu kunokuqinisekisa ukujija okuphezulu kwaye kunokuzisa ithuba elide. Ukuqhawulwa okusebenzayo ngaphezulu komgca ophezulu we-median (uml) kwaye nge-R1 yeveki kuyathandwa emva kokusilela ukufikelela kumgca we-median (ml).
Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphandle komzimba weefolokhwe ezantsi kungazisa ukuphuma okuphuma kuluhlu oluncinci.
tags Cad, NZD, I-NZD / CAD, nzdcad
I-Dollar icinezelwe njengeNtloko yokuKhathala iseti kwiNtetho yeNtetho yokungaqiniseki
Idola lawa phantsi xa uMongameli uTrump wabhengeza ukuba isivumelwano sokurhweba sinokulinda kude kube nguNovemba 2020 xa unyulo lwaseMelika luzakubanjwa.
Kwiiveki ezidlulileyo, uMongameli wayesele ebhengeze ukuba yena ne-China "bakwimeko yokugqibela" yesivumelwano kwiintetho zorhwebo ezanyanzelisa imfuno yedola kwaye zonakalisa iindawo ezikhuselekileyo.
Ngenxa yokunyuka kwemida kwiimfazwe zorhwebo, xa uMongameli uTrump wabhengeza ukonyusa amaxabiso ezinto ezithunyelwa ngaphandle ezivela eBrazil naseArgentina ngelixa ephinda-phinda amaxabiso eempahla zaseFrance ngekhulu leepesenti, kwabonakala ngathi abatyali-mali badiniwe kukungqinelana okwenziwe ziintloko zorhwebo.
I-US ikwadlulise amatyala amabini ukuxhasa amalungelo oluntu kunye nokuphelisa ukuthunyelwa kweembumbulu ezithile emapoliseni aseHong Kong kunye nesithathu ekubikwe ukuba sibangele umsindo e-China, umthetho-mthetho wase-Uighur, konke oku kubonwa ngabatyali-mali njengezithintelo ezinokuthi zithintele inkqubela yeentetho zorhwebo.
Umhlalutyi uqaphele ukuba ngeentetho zorhwebo ukungaqiniseki, kunzima kakhulu ukuqikelela ukuhamba kwedola njengoko i-China ingakhange iqinisekise nakuphela kwayo.
Ukuphuma ngolwe-Sihlanu ngamanani emivuzo engeyiyo eyasefama abathi abahlalutyi baqikelele ukuba anokuhambelana nezibalo zoqoqosho ezazikhutshiwe ngaphambili ezazingathandeki.
Idola lalibuthathaka kancinci ngokuchasene ne-euro ukuba ithengise nge- $ 1.1084, ime kwi-0.1%.
Kwezinye iindidi zayo zemali, i-greenback ithengiswe kwi-97.551.
I-geopolitics yase-UK yayibonakala ilungile kwiPonti yaseBritane njengoko uninzi lweevoti lwalukhomba kwi-conservatives win. Ngenxa yoku, iponti yajikeleza ngaphezulu ukubetha iinyanga ezisibhozo eziphakamileyo kwiiyure zokuqala zosuku.
I-AUD, i-CAD kunye ne-Kiwi Dollar
Kwelinye icala, idola yase-Australia yehle nge-0.2% ukurhweba nge- $ 0.6838 emva kokukhutshwa kweentengiso zentengiso.
I-kiwi inyuke nge-0.4% ukuya kurhwebo kwi-0.6555 yeedola, ibetha iinyanga ezine ukuphakama kunye nokudibanisa inzuzo kule veki inikwa uluvo oluhle lorhwebo.
I-NZD ifikelele kwiinyanga ezine eziphakamileyo ze-NZD 1.0457 ngedola yase-Australia nge-3% yenzuzo kwintengiso.
Idola yaseCanada ifikelele kwinyanga enye ephezulu ukurhweba nge- $ 1.3203 ngedola emva kokuba ibhanki ephezulu igqibe kwelokuba ibambe amaxabiso ngokuma njengoko ibona inkxaso kuqoqosho.
tags Aud, Pound yaseBrithani, Cad, IDOLI, Kiwi Dollar, Iintetho zoRhwebo